ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ မအားသေးပါ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ် Related posts ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ပြောင်းလည်း ပြောင်းပြောင်းပါပဲ (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ အာစိတို့ကြိုက်တဲ့ကား (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ဟိုပူရ သည်ပူရ (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ လူသားဆန်တဲ့ အမှု (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ …. (0)
ဆောင်းယွန်းလ ● မသိစိတ်ထဲမှာ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ လွယ်မယ်ထင်လို့ ခြင်ရိုက်မိမှ ဆင်ဖမ်းကျားဖမ်းနေရသလိုမျိုး ရွှေထီးဆောင်းဖို့ မရည်ရွယ်ပေမယ့် အသက်ဆက်ဖို့ ပျက်ပေးနေခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ ရာဇဝင်ထဲက ဂုဏ်ယူစရာအဖြစ်အပျက်တွေ ပုံပြင်ဆန်ဆန် လေထဲအငွေ့ ပျံတက်သွားတဲ့ မစားရဝခမန်းများ ဒွိဟကို အထက်ဆုံးဓါးတွေပေါ်တင်ဖြတ်ပေမယ့် ဝမ်းရေးနဲ့ လွမ်းရေး နှစ်ရေးလုံးက မပြတ်နိုင်တဲ့ သံသရာပဲ သဲထဲကိုသွန်မိတဲ့ရေမှာ အပြစ်အနာအဆာပါကြောင်း စွပ်စွဲတတ်တဲ့ လက်ညှိုးတွေအောက် ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်းပျောက်ပြီး ကျောနှစ်ခြမ်းပေါက်ခဲ့တယ် နောက်ကျခြင်းဟာ စောစောစီးစီးရောက်လာတတ်တဲ့ရာသီပဲ မပြည့်စုံခြင်းဟာ အလျှံပယ်မပြတ်လည်နေတဲ့ နာရီတွေပဲ မိတ်ဖွဲ့ဖို့ ရန်သူတွေများပြီး ရန်ဖြစ်စရာ မိတ်ဆွေတွေကရှားလာတယ် အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဟစ်ကြွေးရင်း ပစ္စုပ္ပန်ကိုမတန်မရာဈေးနဲ့ ချကြွေးခဲ့ရဖူးတဲ့ အတိတ်တွေ ကြွေတလှည့်ဝေတလှည့်ဟာ မျက်ရည်နဲ့ အဆိပ်ပန်းများ အဆိုးအပျက်အရေးအသားတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာ မုသာဝါဒကံထိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လာပြီးနောက်...
ကျော်နိုင် – ပြောင်းလဲစေချင်တာလေးတစ်ခု (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်မှ မကွေးသို့ ၁၀/၆/၂၀၁၈ ည ၈:၃၀ တွင်ထွက်လာခဲ့သော ခရီးသည်တင် အဝေးပြေးကားသည် မကွေးသို့ရောက်ရန် ၁၃မိုင်ခန့်အလိုသို့ ၁၁/၆/၂၀၁၈ နံနက် ၄:၀၀ နာရီအချိန်၌ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ကားလမ်းတလျောက် ရပ်တန့်နေသောယာဉ်တန်းရှည်ကြီး၏နောက်တွင် ဝင်ရောက်ရပ်တန့်လိုက်သည်။ မော်တော်ယာဉ်များ ရှေ့သို့မတိုးနိုင်ရသည့်အကြောင်းရင်းက မိုးရွာသဖြင့် အရှိန်နှင့် စီးဆင်းလာသောတောင်ကျချောင်းရေများက ကားလမ်းကိုကျော်၍ တဟုန်ထိုး စီးနေသောကြောင့်ဟုဆိုသည်။ ဟိုးအရှေ့ဆုံးမှပိတ်မိနေသောကားမှာ ညသန်းခေါင်းကျော်အချိန်ခန့်ကတည်းက ပိတ်မိနေသည်ဟုသိရသည်။ တစ်ခုကံဆိုးသည်မှာ ထိုကားသည် Ambulance (လူနာတင်ယာဉ်) တစ်စီးဖြစ်ပြီး ကားပေါ်တွင် မကွေးဆေးရုံသို့ပို့မည့် မွေးလူနာမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးပါလာသည်ဟု သိရပါသည်။ မိခင်လောင်းသည် အသက် ၁၈ နှစ်သာရှိသေးပြီး မိခင်နှင့်ကလေး ၂ ဦးစလုံး၏ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသောကြောင့် မကွေးဆေးရုံသို့...
အေးမိမိ – တခါတခါတော့လည်း ပြန်လာစေချင်တယ် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ တခါတလေ အတွေးထဲမှာ အဲ့ဒိမှာ ပိုအဆင်ပြေလေမလား …… မြင့်မားတဲ့ပညာတွေသင်ခွင့်ရှိတဲ့အရပ်ဒေသ လူသားအခွင့်အရေး အလေးပေးတဲ့နိုင်ငံကြီး မင်း ပျော်နေပြီလား …… တကယ်ဆို …… ပြန်လာသင့်နေပေမဲ့ တို့မသိနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေအုန်းမယ်ထင်ပါရဲ့ …… မြတ်ရွှေတိဂုံဘုရား ဖူးမျှော်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်း …… အမိမြေကိုချစ်ခင်တွယ်တာတဲ့သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေအပေါင်းကို အမြဲသတိရနေတဲ့ သူငယ်ချင်း …… မြန်မာအစားအစာတွေ လွမ်းနေတဲ့သူငယ်ချင်း… လူမှုရေးတာဝန်တွေအမြဲကြေတဲ့ သူငယ်ချင်း… တို့တတွေအတူလက်တွဲ တိုင်းပြည်အတွက် တနေရာရာကနေ လုပ်အားတွေလည်းပေးချင်သေးတာမို့…… အခါအခွင့်သင့်ရင်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ခြေလာနင်း ပြန်လာခဲ့အုန်း …… သူငယ်ချင်း။ ။ Tags: ချင်း, အေးမိမိ...
စိုးခိုင်ညိန်း ● ဘုရားကုန်းတော် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂ဝ၁၈ အနည်းငယ် အိုဟောင်းသလိုဖြစ်နေတဲ့ စောင်းတန်းကနေ တလှမ်းချင်း ဖြေးဖြေးအေးအေးနဲ့ ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်ကို ကျွန် တော်တယောက်တည်း တက်ခဲ့လိုက်တယ်။ အုတ်လှေခါးထစ်တွေဟာ ဖုန်တွေ သဲတွေနဲ့ တချို့လှေကားထစ်တွေကတော့ အင်္ဂတေတွေကွာပြီး ကွဲအက်နေတာတွေ့ရတယ်။ တူနှစ်ကိုယ် တောင်ဘက်မုခ်က လှေခါးထစ်တွေတက်ရင်းနဲ့လေ ရေကြည့် ကြတာပေါ့ဆိုတဲ့ ခင်မောင်တိုးရဲ့သီချင်းလေးကို သတိရလိုက်မိပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ လှေခါးထစ်တွေကိုတော့ ရေမ ကြည့်မိပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီဘုရားလေးမှာက တောင်ဘက်မုခ်ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ကားလမ်းဘေးကနေတက်ရတဲ့ ဒီ မြောက်ဘက်မုခ်တခုတည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တာက ကားနဲ့ကွေ့ပတ်တက်ရတဲ့ ကားလမ်းလေးပဲရှိပြီး တောင်ဘက်နဲ့ အရှေ့ဘက်မှာက သစ်ပင်ခြုံနွယ်တွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး လမ်းရယ်ဘာရယ်လို့ မရှိဘူး။ ဒီမြို့လေးကို ရောက်တာကြာပေမဲ့ ဒီဘု ရားလေးပေါ်ကိုတက်ဖို့...
ဆရာထက်မြက်၏ အမျိုးသားစာပေဆုဆိုင်ရာ ပြောကြားချက် ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေး မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်သော စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ဇွန်လ ၇ ရက် နံနက် (၁၀) နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ အမှတ် ၂၂၀ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံ – ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) ဆရာထက်မြက်၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်မှာ … ကျနော်တို့ စာပေညီလာခံရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စတုတ္ထစာပေဆု ကော်မတီက ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားကို (၁) အချက်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ကဗျာဆုပြသနာပေါ်နေတဲ့ဟာက မော်ဒန်ကဗျာမှ ဆုပေးရေးဆိုတာ...
ဂျူနီယာဝင်း – ဘိုထိုင်အိမ်သာကို တီထွင်သူ ဘယ်သူလဲ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ ဘိုထိုင်အိမ်သာဟုခေါ်သော ကုလားထိုင်မှာထိုင်သော ပုံစံရှိသော အိမ်သာကို စတင်တီထွင်အသုံးပြုသူမှာ Sir John Harington (ဆာ ဂျွန်ဟာရင်တန် ) ဖြစ်သည်။ သူက ၁၅၈၉ ခုနှစ်တွင် သူ့အိမ်မှာ တခု၊ နောက်တခုက အင်္ဂလန်၏မိခင်ကြီး Queen Elizabeth 1 ( ပထမမြောက် အယ်လီဇဘက်ဘုရင်မ ) အတွက် တပ်ဆင်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အသုံးပြုသူ နည်းပါးပြီး တကယ်တန်း လူတွေကြားထဲ ရောက်လာခဲ့တာ နောက်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်ကြာမှ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာမဂျူနီယာဝင်း၏ အမေးနှင့် အဖြေ စွယ်စုံကျမ်း ၂၀၁၇...
အလင်းလက် – မုသားကိုယ်ရံတော်နှင့် ကာကွယ်ခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ (၁) စစ်ကာလ အမှန်တရားဟာအလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီအမှန်တရားကို မုသားကိုယ်ရံတော်နဲ့ ကာကွယ် ရမယ်လို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လျို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဝန်စတန်ချာချီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (၂) ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်၊ ဂျာမနီကို ဗြိတိန်ကစစ်ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သူလျှိုတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှု ကြောင့် ဂျာမန်တပ်မတော်ရဲ့ရေတပ်သုံး အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးပြီးတီထွင်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ရေးစက်ဖြစ်တဲ့ အင်နစ်ဂမာကို ဗြိတိသျှတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမန်တွေက နေ့တိုင်းလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကုတ်တွေ ပြောင်းသုံးစွဲနေတဲ့အတွက် ဗြိတိသျှတို့အဖို့ စက်ရှိပြီး သုံးမရ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ၀ှက်စာဖော်နိုင်သူ၊ ကျွမ်းကျင်သူ သင်္ချာပညာရှင်တွေကို ခေါ်ယူပြီး ကြိုးပမ်း ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ အဲဒိဝှက်စာကိုဖော်နိုင်တဲ့ စက်တစ်လုံးကို...
စာရေးဆရာသင့်နော်ရဲ့စာအုပ် ရေးသူဖတ်သူဆွေးနွေးပွဲ မန္တလေးမှာ ပြုလုပ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ မန္တလေးခရိုင်၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ စာအုပ် စာစောင်ချစ်မြတ်နိုးသူများအသင်း (Book Club) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော စာပေမြတ်နိုးသူများ စာဖတ်ဝိုင်း ရေးသူဖတ်သူဆွေးနွေးပွဲကို မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်းx မြဝတီမင်းကြီး လမ်းထောင့် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့ နယ်ရှိ ခရိုင်ပြန်ကြားရေးရုံးမှာ ယနေ့ မနက် ၉နာရီမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါရေးသူဖတ်သူဆွေးနွေးပွဲမှာ ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဆုရ စာရေးဆရာသင့်နော်ရဲ့ အတိတ် လူ ပုံရိပ်နှင့် စာအုပ်များ စာ အုပ်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဆရာသင့်နော်၊ ဆရာအနီမောင်၊ ဆရာသိုက်ထွန်းသက်၊ ဆရာဦးထွန်းအောင်ကျော် (တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ)၊ ဆရာညိုထွန်းလူတို့က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသူစာပေမြတ်နိုးသူများနဲ့အပြန် အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် – ငါ့တဲလေး
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် – ငါ့တဲလေး (မုိုးမခ) ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရွှေဘို Related posts ကာတွန်း ရွှေဘို ● မအကြပါနဲ့ … မအကြပါနဲ့ … (0)
ကာတွန်း ATH ရဲ့ အရေးပေါ်ခလုတ် …. (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
KT# နိုင်ငံဟာ နစ်နေတဲ့ ကန္တာရလိုကဗျာ နေချိုသွေး (မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ချောက်ကမ်းပါးအောက်ပစ်ချခံထားရတဲ့နှစ်များစွာမှာ လူကြီးတယောက်ဟာ ငါ လူငယ်တယောက်ဟာလည်း ငါပဲ ကလေးတယောက်ဟာ ငါ။ လက်ရုံးတွေကို လာမဖြုတ်နဲ့ မျက်လုံးတွေကို လာမပိတ်နဲ့ ငါ့နားတွေကို လာမကလိနဲ့။ စိတ်ကိုတမြေ့မြေ့ကြွေကျအောင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်သလို ခံရဆိုးခဲ့ ရှေ့တိုးဖို့ခြေလှမ်းတွေကိုသံခြေကျင်းတွေနဲ့အလှဆင်ခံထားရ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန်တွေကို ထူးခတ်ခံထားနေရ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားငယ်တစ်ကောင်လောက်တောင် မာန်မာနတွေကြီးကျယ်ခမ်းနားခွင့်မရ ဖြစ်ရပုံများ ရယ်ရမလား ငိုရမလား ဝမ်းနည်းရမလား ဝမ်းသာရမလား ကျေးဇူးပဲတင်ရတော့မလား။ သောင်ပြင်မှာလွတ်ကျောင်းခံရတဲ့ခွေးလို ငါတို့ဘဝများ ကမ္ဘာကြီးဟာရွာဆို နိုင်ငံဟာ ရွာလည်နေတဲ့မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်ရာအရပ် အခိုင်းအစေကျွန်ကောင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ ဒုက္ခသည်တွေစုဝေးရာစခန်း “လောက်´´တွေစားကျက်ကျရာနေရာ ဥပဒေရဲ့အထက်ကအာဏာရှင်တွေရဲ့ဝပ်ကျင်း ဆွံ့အနားမကြားနဲ့မယောင်ရာဆီလူးတွေရုပ်တည်ကြီးထိုင်နေတဲ့ပြတိုက် သေနတ်တဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးတဖက်နဲ့ငတ်ကျန်မွဲတေနေတဲ့နိုင်ငံ လူကြီးမင်းတို့မို့လုပ်ရက်လေချင်း သွေးသံရဲရဲခန္ဓာကိုယ်ဆန်ကာပေါက်တွေနဲ့ နစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အဆီအနှစ်တွေကိုစစ်ယူနေကြပုံများ မျက်ရည်ကြားက တိုင်းပြည်ဟာ...
>Thadingyut Fullmoon Day in Chiang Mai
မောင်လူရေး – ကိုကိုရဲ့ ညီမလေးအချစ် (၁) https://t.co/Fh9b5PfYw5 https://t.co/3sig8nKTA0 about 30 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း နေညိုအေး – ဘယ်လောက်ပေးမလဲ https://t.co/ZMhj3vVKqc https://t.co/5BuIfrJ086 about 43 minutes ago ReplyRetweetFavorite